Kuthekani nge-'Netflix 'okanye i-'HBO' yeencwadi? | Uncwadi lwangoku
Njani nge 'Netflix' okanye 'HBO' yeencwadi?
Inkqubela phambili kwezobuchwephesha isinike ithuba lokuba sibe naso nasiphi na isixhobo esisesandleni esenza ukuba ubomi bube lula kancinci, kwaye kwihlabathi loncwadi belingazukuba lincinci. Andazi ukuba yayiyi-'HBO 'okanye' iNetflix 'kuqala, kodwa zombini ezi nkampani zazalelwa ukuze "intlawulo" yenyanga nenyanga sibe nemenyu enkulu yoluhlu kunye neemovie kumgangatho we-HD esinazo. Njengokuba, Njani nge 'Netflix' okanye 'HBO' yeencwadi? Iya kuba yinto entle, akunjalo?
Ewe, into enje bayenzile eArgentina, kwaye iyazibiza 'Masifunde'. Ikwiwebhusayithi ekwafumanekayo njengesicelo, esivumela ukuba sifunde zonke iincwadi esizifunayo nge-79 pesos (engaphantsi kwe- $ 6). Into esiyifumanayo yile isekhona ayifumaneki eSpain, kodwa besifuna ukucinga malunga nabo bafundi baseArgentina, basePeruvia, baseUruguay, baseColombia, abaseParaguay kunye nabaseMelika esinabo, baninzi, hleze bangekaziva ezi ndaba zimnandi kangaka.
Yintoni esinokuyifumana 'masifunde'?
En 'Masifunde' uhlaza amabali kuye wonke umntu: ingxelo yangoku, inoveli yothando, inoveli yolwaphulo-mthetho, ulutsha, ukukhula komntu, ulawulo kunye necandelo labantwana. Unokufunda bobabini ababhali bakudala kunye nabakudala, Abathengisi abakhulu, kunye fumanisa ababhali abatsha.
El ikhathalogu yohlobo iyafumaneka ibanzi: intsomi, uyilo, inoveli, uyilo, ukufota, ukupheka, imfundo, ezembali, umthetho, izifundo zoncwadi, amayeza, ulutsha olungesontsomi, imibongo, inkanuko, njl. Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi ezinye iindidi ezikhoyo, ukuba ungabhalisa njani, sithini isicelo kwaye uza kuhlawula malini ngenyanga ukonwabela le nkonzo yokubhala (ilizwe ngalinye kula akhankanyiweyo lineendleko ezahlukeneyo), cofa apha kwaye ufumane yonke into enxulumene 'Masifunde'.
Ukuba kukho enye inkonzo efanayo 'Masifunde' kwamanye amazwe okanye ukuba sele ungumsebenzisi weli qonga kwaye ufuna ukwabelana ngamava akho kwelo phepha nathi kunye nabanye abafundi, ungakwenza oko kwicandelo lamagqabaza. Enkosi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Njani nge 'Netflix' okanye 'HBO' yeencwadi?
Umbono 'omangalisayo' sele ukhona: ithala leencwadi. Nokuba yincwadi ebonakalayo okanye ye-elektroniki.
Kwelinye icala, i-HBO kunye neNexflix ziyingozi ngandlela ithile. Bazisa kuphela ukumiselwa komgangatho, bonke basikwe yipateni efanayo. Ndicinga nge-netflix yokubhala ebonelela kuphela ngeencwadi ezivela kubavakalisi abakhulu hayi ezincinci.
UKeanu Reeves uvula indlu yokupapasha yaseHollywood ukupapasha iincwadi zamagcisa